IPlatzi: Ipulatifomu ecacile yokufunda ngobuchwepheshe (Isipiliyoni Sami) | Kusuka kuLinux
Luigys toro | | Okufakiwe, I-GNU / Linux, Ukuhlela, Kunconyiwe
Ngicabanga ukuthi ukufunda okuqhubekayo kuyinkqubo ebaluleke kunazo zonke kubantu, sifunda kusukela lapho sizalwa size sife futhi kufanele kube yisibopho sokuziphatha ukuzama ukufunda okuthile okusha nsuku zonke. Namuhla, ukutholakala kwemfundo kunoma iyiphi indawo kutholwe ngentando yeningi, iNyuvesi, izikhungo kanye nezifundiswa sekuyizindlela zokugunyazwa, kuyilapho ulwazi oluningi lutholwe emithonjeni ehlukene, imvamisa ngendlela ebabazekayo nengahlelekile. ezinye ngendlela ehlelekile, ehlelekile nenesisekelo esihle.
Konke lokhu kuholele ekwakhiweni kwama-multiple amapulatifomu agxile ekufundeniEzinye zazo zikhululekile, zikhululekile, ziyimfihlo, zikhokhelwe noma zimane nje ziyingxube, ngayinye inezinzuzo nezingozi zayo, futhi eziningi zazo zivumela abantu abaningi ngokwengeziwe ukuba baqeqeshwe ngokwanele ukwenza umsebenzi wezandla, ubungcweti noma ukugxila endaweni enesidingo esikhulu . Ngibambe iqhaza mathupha kulezi zinkundla, ngasinye sazo singinike ulwazi olwahlukahlukene, kepha ngaphandle kokwesaba ukuthi ngabe nginephutha, uPlatzi nguyena obambe iqhaza elikhulu empilweni yami yokusebenza.
1 Yini iPlatzi?
2 Ungayifunda kanjani iLinux ngePlatzi bese uthola isitifiketi?
3 Ungafunda kanjani ukuhlela mahhala ngePlatzi?
4 Ukwazi Izinhlanga ZasePlatzi?
5 Wina umfundaze wenyanga yokufunda eSplatzi
IPlatzi iyi- ipulatifomu yezemfundo eku-inthanethi Lokho ngikubheka kumnandi kakhulu, kuyasebenza futhi kuyingcweti, okugxile ekusizeni abafundi ukuthi bathole ulwazi olubavumela ukuthi bazuze ukuthuthuka okukhulu maqondana namaholo abo, isikhundla somsebenzi noma amandla abo okuthuthukisa noma okuzenzela izinkampani zabo.
IPlatzi ijikeleza kakhulu kwezemfundo ehlobene nobuchwepheshe kodwa hhayi ukuthi kuxhunyaniswe nezinhlelo, ngoba ihlanganisa imisebenzi nezifundo ezizosivumela ukuthi sifunde ekwakheni isithombe esanele ngathi ekwakheni ukusetshenziswa kwamaphupho ethu, ngokufunda izinqubo ezidingekayo ukuze siphile imibono yethu, siyisebenzise izinkampani zethu, zithuthukisa futhi ziklame imikhiqizo yethu, zithengise izixazululo zethu noma zimane zisisize sizijabulele ngenkathi senza imilingo noma ukuthi yini ngamanye amazwi okungashiwo, ngenkathi kwenziwa uHlelo.
Le nkundla inakho izifundo ezingaphezu kwekhulu nemisebenzi engama-100, ngaphezu kwabafundi abayi-100000 abafunda ngokuthuthukiswa kwewebhu nohlelo lokusebenza, ukumaketha oku-inthanethi, ukwakheka kwesixhumi esibonakalayo, amaseva, phakathi kwabanye, abasebenzisa ipulatifomu ezungeze umphakathi osebenzayo, ogcwalisa ukufunda ngamaKilasi abukhoma namaRekhodi afundiswa ochwepheshe bemboni.
Impumelelo yePlatzi, ngaphandle kokungabaza, ingamandla ayo okunika amandla abafundi bayo, ngokufunda okubhekiswe emphakathini jikelele ngokuqukethwe okukhangayo nokusebenzisekayo, ngezindlela zokufundisa ezilula nezijabulisayo, kodwa ngaphezu kwakho konke ngezinto ezintsha eziqhubekayo. Ngokufanayo, ipulatifomu inezinga eliphakeme lokuqedwa kwezifundo elidlula ama-70%, okusho ukuthi abantu abanesibindi sokufunda ePlatzi, iningi labo ligcina liqede izifundo eziphakanyiswayo, okuthile okubaluleke kakhulu emphakathini onezinye izindlela eziningi kodwa ngeshwa ukuthola kunzima ukucacisa izinjongo.
Ungayifunda kanjani iLinux ngePlatzi bese uthola isitifiketi?
Into yokuqala engiyenzile lapho ngiqala ngePlatzi ukwenza i- Inkambo Yokulawulwa Kweseva yeLinux, lapho basinikeza khona izizathu ezinhle zokuthi kungani kufanele sisebenzise i-Linux kumaseva, esifundisa ukwenza ukucushwa okuyisisekelo nokuthuthukile, okufana nokwenza ipharamitha kokuqala, ukumiswa kohlelo, ukwahlukanisa nokuphathwa kwebhuthi, izenzo ezahlukahlukene zokuphatha kahle iseva , ukuthuma, ukuqapha nokwenza isipele, kanye nemfundo yezokuphepha ye-Linux esezingeni eliphakeme.
Izifundo zihlukaniswe ngamavidiyo amaningi agcwaliswa yimithombo ethokozisayo, into engiyithanda kakhulu, ukuthi kuzo zonke izifundo kunezinselelo abafundi okufanele bazinqobe futhi ezivumela ukuqinisekisa ulwazi olutholakele.
Ekupheleni kwesifundo singathatha isifundo seSitifiketi, esizoqinisekisa ulwazi olutholakele futhi olusekelwa yiPlatzi.
Ungafunda kanjani ukuhlela mahhala ngePlatzi?
Lezi zifundo ziqala ngezibonelo ezilula njengokukhiqiza isexwayiso kusiphequluli sethu kanye nencazelo eningiliziwe kodwa ejabulisayo yokuthi lokhu kwenzeka kanjani, bese isinikeza ukuvakasha kokusebenza nemiyalo yohlelo eyisisekelo bese ingena sombulula amaphrojekthi wokuhlela ayisithupha azosivumela, phakathi kokunye, ukubala isisindo sethu kwenye iplanethi (ngokuya ngezimo zamandla adonsela phansi ngamunye wabo), dweba ku-Canvas ngemicibisholo yekhibhodi, wakhe isisekelo somdlalo wethu wevidiyo, ubale izinkinga ezivamile njenge-fizzbuzz edumile, dala i-ATM noma jabulela ukwenza uhlelo olusezingeni eliphezulu lwe-server server client.
Uma ungafundi ukuhlela ngohlelo lwePlatzi Basic Programming Course, ngiyakuqinisekisa ukuthi kuzoba nzima kakhulu kuwe ukufunda ukwenza uhlelo, kulula impela futhi kucacile, ngezibonelo eziyinkimbinkimbi ezinezixazululo ezilula.
Usizo olwengeziwe engiluncomayo ukuthi usebenzise izindlela zokufunda, engikuphakamisa njengesibonelo kulabo abafuna ukufunda ukuhlela ku-Linux, yilokhu okulandelayo:
Ukwazi Izinhlanga ZasePlatzi?
IPlatzi igcina uhlelo lweCustomer oluhlanganisa ndawonye uchungechunge lwezifundo ezivela ezindaweni ezahlukahlukene, ngokudlulisa umsebenzi esesithole ulwazi oluhlukahlukene oluzosivumela ukuthi sizibheke njengongoti kuleyo ndawo, ngokwesibonelo, ukwenza umsebenzi weSerge Administration kanye ne-DevOps okufanele ube nayo ivume Isingeniso sezifundo zokugcina imigqa nezokulawula, iLinux Server Administration Course, i-DevOps Professional Course, i-Deploy Course ne-Amazon Web Services, i-Azure laaS Course, i-Azure PaaS Course, i-DigitalOther Course, i-Deploy Course ne INow.sh, i-Application Architecture Course ne-Docker kanye nenkambo entsha ye-IBM Cloud Fundamentals, okusho ukuthi, sizoba nolwazi olunzulu noluyinkimbinkimbi endaweni, okulingana ezimweni eziningi neziqu zaseyunivesithi.
IPlatzi njengamanje inikeza imisebenzi elandelayo:
Ukuhlela Isiqu Esiyisisekelo
Ukuthuthukiswa kokubuyela emuva nge-PHP
Unjiniyela we-Apple Fullstack
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lwe-Android
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lwesiphambano
Ukuthuthukiswa kokubuyela emuva noRuby
Isu Lokumaketha Nedijithali
Ukuphathwa Kweseva ne-DevOps
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza nge-ASP.NET
Idatha enkulu neSayensi yeDatha
Ukuthuthukiswa kokubuyela emuva ePython
Idizayini Yomkhiqizo Wedijithali ne-UX
Ukuthuthukiswa kokubuyela emuva ku-GO
Ukumaketha Okusekelwe Kwedatha
Lapho usuphothulile futhi uvunyelwe imisebenzi noma izifundo uPlatzi akunikeza isitifiketi esinjengalesi:
Wina umfundaze wenyanga yokufunda eSplatzi
Okokuqala akutshele ukuthi iplatzi inikeza izifundo ezi-5 ezibaluleke kakhulu zamahhala njenge IGit neGitHub Professional Course, i-Basic Programming Course, i-Voice to Voice Marketing Course, i-Personal Branding Course, ne-Software Engineering Fundamentals.
Ngaphezu kwezifundo ezishiwo ngenhla, uPlatzi unikela ngezinhlelo zokufundisa zanyanga zonke nonyaka lapho singajabulela izifundo nezifundo ezinhlobonhlobo ezifundiswa ochwepheshe abavela ezimbonini ezibaluleke kakhulu. Lesi sikhathi sikunikeza i- beca inyanga ku i-platzi Ukuze uthole zonke izifundo ongazifunda ku-inthanethi, mane ungene kusuka lapha bese ulandela izinyathelo ezikhonjisiwe, ngokufanayo sizophinda siqongelele izinyanga kulabo basebenzisi abajoyina, i-win win.
Yize kusobala kuwo wonke umuntu, mina ngokwami ​​ngincoma ukuzifundisa nokufunda kuzinqubo ezahlukahlukene esinikezwa yi-intanethi, kepha-ke, iPlatzi yileyondlela ehlelekile, esebenzayo nejabulisayo yokufunda engikhulume ngayo kuwe kaningi, ingisebenzele kakhulu ukukala ukwazi ubuchwepheshe obusha nokulingisa kahle imibono yami. Okufanele ngikugqamise ngePlatzi ukuthi kusukela ngomzuzu wokuqala kukugqugquzela ukwenza imibono yebhizinisi lakho igcwaliseke, okungukuthi, isishukumisela ukuba sibe osomabhizinisi futhi sithuthuke ngokomsebenzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » IPlatzi: Ipulatifomu ecacile yokufunda ngobuchwepheshe (Isipiliyoni sami)
U-LUIS FERNANDO DOMINGUEZ kusho
Siyabonga ngokuthunyelwe kwe-PLATZY.
Eposini ukhombisa ukuthi kunezifundo ezithile zamahhala ezifana nomkhiqizo womuntu siqu. Yebo, azikho mahhala noma okungenani angibonanga. Uma ungaba nomusa kakhulu ukukhombisa ukuthi ungazifinyelela kanjani izifundo zamahhala (ngethemba angazi ukuthi kufanele ukhokhe noma yini ngaphambi kokuthola eyamahhala).
Ngiyabingelela futhi ngiyabonga.
Phendula u-LUIS FERNANDO DOMINGUEZ
UGenesise camacho kusho
Ngenza i-Personal Brand futhi imahhala ngokuphelele uLuis.
Phendula uGenesise Camacho
Ngizoshiya le posi futhi ngizohamba kancane
IPlatzi ihamba phambili emhlabeni kwezemfundo eku-inthanethi !!!! Ngingakhokha okubhaliselwe okuyinkulungwane, ngoba okuqukethwe kwayo kusezingeni futhi ipulatifomu yayo inkulu ngokweqile !!!!
Ukungena okuhle sithandwa, qhubeka, sizokubona phezulu. 😉
Izifundo zePlatzi azimele izindleko zenani lezomnotho, ikhwalithi ephansi kakhulu yababonisi.
Endabeni yami, ngikholelwa okuphambene nalokho, intengo yezifundo ibonakala inembe kunayo yonke, uma kubhekwa ukuthi abathweswe iziqu babiza izikhathi ezili-10 noma ezingama-20 ngaphezulu futhi ngenyanga ngangibona eziningana ngasikhathi sinye ngenani eliphansi.
Anakin SW kusho
Yini ongahloniphi, ngabe ukhokhelwe malini ngendatshana? Kubonisa umngane omningi kakhulu.
Phendula ku-Anakin SW
Akunalutho, ngifunda kuyo, futhi uma ufaka isicelo kuScholarship banginika inyanga yeScholarship njengoba isho endatshaneni, kepha ngaphandle kwalokho, iPlatzi iyinkundla engikhonza kakhulu osukwini lwami usuku nosuku nokuthi kusivumele ukuthi sifunde ngezinto eziningi ezungeze ubuchwepheshe.
Angihlanganyeli nomqondo, angisho ukuthi othisha basePlatzi abazi, ngoba mhlawumbe bazi okuningi. Kepha abanalo ulwazi lokufundisa, imvamisa bachaza ngendlela ephathekayo, bakutshele okufanele ukwenzele into enjalo futhi manje, kepha hhayi okunye. Kufanele uhlele okuningi. Ngokwami, ngicabanga ukuthi uma ufuna, ngokwesibonelo, ukufunda ukwenza uhlelo ungenawo umbono, kungcono ukuthi ufunde imibhalo, izinkomba, njll.
PS: okuthunyelwe kubonakala kuthengisiwe kimi, ngiyethemba nginephutha.
UFelipe Rodriguez kusho
Izinga eliphansi lezifundo, othisha bavame ukwenza amaphutha ngokwemigomo, abanye ngisho nasezintweni eziyisisekelo, izifundo zikhawulelwe ekufundeni ulimi ngokujwayelekile (ngalokho ngifunde imibhalo futhi ngifunda ngokushesha).
Ngokubona kwami ​​i-edx ingcono, ukuqinisekiswa kuyabiza kakhulu futhi ngokuvamile kubhalwe ngesiNgisi, kepha ikhwalithi yezifundo nothisha bazo nezihloko ezahlukahlukene ezihlanganisiwe ziphakeme kakhulu.
Phendula uFelipe Rodríguez
UJose Bernardoni kusho
umnikelo omuhle kakhulu, ngiyabonga… ¡¡¡¡¡
Phendula uJose Bernardoni
I-athikili ethokozisayo. Uhlelo lolimi olwesabekayo, kepha luyathandeka kunoma yikuphi.
Buyekeza isibonelo isigaba esilandelayo, sicela:
"Uma ungafundi ukwenza uhlelo ngePlatzi Basic Programming Course, ngiyakuqinisekisa ukuthi kuzoba nzima kakhulu kuwe ukufunda ukwenza uhlelo, kulula impela futhi kucacile, kunezibonelo eziyinkimbinkimbi ezinezixazululo ezilula."
U-Alberto Cardona kusho
Nginokungabaza okuncane, inyanga yokuqala imahhala futhi ngemuva kwenyanga inkokhelo yokuqala isivele ikhokhisiwe?
Phendula u-Alberto Cardona
Ngicabanga ukuthi kufanele ukhokhe inyanga ukuze uthole enye inyanga yamahhala.
Kufanele ukhokhe inyanga yokuqala, bese kuthi eyesibili ibe mahhala
Futhi uma ukhokha njalo ngenyanga, ungayishintsha indlela yokukhokha ngokuzayo?
Ngempela, futhi ngokwazi kwami, uma ukhokha inyanga futhi ngaleyo nyanga uthatha isinqumo sokudlulela onyakeni, bazobona inani olikhokhele leyo nyanga
Uma usaqala emhlabeni wezobuchwepheshe futhi uthanda ukuthuthukisa, leli khasi likhulu kakhulu ukufunda ukuluhlela http://www.w3ii.com
Ikhasi ngokwalo lilungile, ngicabanga ukuthi kuyisinyathelo esihle sokufunda imiqondo emisha. Yize ukuba neziqu / isitifiketi kubonakala kuyinto encane kimi, ngoba ungathatha isivivinyo kaningi ngendlela ofuna ngayo.
Isayithi lihle, ufunda izinto eziyisisekelo kepha uhlala lapho. Ngifunde ukuhlela ku-Go in https://apuntes.de/golang futhi manje ngifunda iReact.